Solar Fusion: Teknụzụ mgbanwe mgbanwe nke Huawei na ike anyanwụ | Green Renewables
Ejikọtara ike anyanwụ na teknụzụ mgbanwe iji nweta ihe kacha mma na ya. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ya Ngwakọta anyanwụ. Ọ bụ ọgbọ na-abịa smart residential photovoltaic ngwọta nke Huawei chepụtara. Echiche mgbanwe a na-emesi ike na teknụzụ dị mma na nke ọhụrụ iji nye ụkpụrụ nrụnye kachasị mfe yana nchekwa kachasị elu na ogologo oge na-arụ ọrụ. Ebumnuche bụ isi nke Solar Fusion bụ na ụlọ nwere ike ịnweta 100% nke onwe ya.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Solar Fusion, njirimara ya na ebumnuche ya.
1 Gịnị bụ Solar Fusion
2 Kedu ihe bụ Sistemụ Fusion Solar?
4 Uru nke ike anyanwụ
Gịnị bụ Solar Fusion
Huawei wepụtara ọgbọ na-esote residential smart photovoltaic solution "FusionSolar", na-ekwusi ike na teknụzụ smart ọhụrụ, na-enye ụkpụrụ nrụnye kachasị mfe, nchekwa kachasị elu na ogologo oge na-arụ ọrụ, na ihe mgbaru ọsọ bụ 100% nke anụ ụlọ onwe ya. Sistemu PV dị n'elu ụlọ ga-egbo mkpa na-eto eto maka ojiji nke ya. N'ihi nke a, a chọrọ usoro nchekwa ike ka mma.
Usoro emebere maka ndị nwe ụlọ ọkachamara na ndị nrụnye. Ndị na-arụ ọrụ ebe obibi ga-enye ndị nwe ụlọ ikike dị ike na nke ga-eme n'ọdịnihu nke na-eme ka arụmọrụ dị elu, mgbanwe na ntinye ngwa ngwa, ma na-enye ngwọta dị mma nke na-egbo mkpa ndị ọrụ na ndị ahịa, dị ka nchọpụta dịpụrụ adịpụ nke ọdịda, iji nwetakwuo ihe. Ezi na obere mmezi.
Huawei na-ejikọta teknụzụ dijitalụ na ịntanetị kachasị ọhụrụ yana teknụzụ anyanwụ obibi. Teknụzụ a na-enye gị njikarịcha nke ọgbọ ike fotovoltaic, Ngwakọta batrị nkwụnye na-egwu na njikwa ike ụlọ smart.
N'ime usoro ụlọ obibi ọhụrụ nke ụlọ obibi, ike fotovoltaic na-emepụta site na mbara igwe na-egbo mkpa ọkụ nke ụlọ n'oge ehihie, na ike fọdụrụnụ nke a na-emepụta na-eji batrị batrị wee wepụ ya iji gboo oke ọkụ eletrik. Arịrịọ maka ọkụ eletrik n'abalị ma ọ bụ n'ehihie. N'ụzọ dị otú a, usoro fotovoltaic obibi obibi nwere ike nweta ọkwa dị elu nke iji onwe ya na-eme ka ọ dịkwuo elu iji nweta elu ụlọ iji nweta ume.
Kedu ihe bụ Sistemụ Fusion Solar?
Usoro nwere akụkụ ndị a:
Ebe ike smart: Inverter arụmọrụ dị elu, yana arụmọrụ nke 98,6%. Enwere ike iji interface nchekwa nchekwa ike agbakwunyere ozugbo.
Ihe kacha mma batrị fotovoltaic: 99,5% arụmọrụ. Hapụ akụkụ ndị ọzọ n'elu ụlọ nke ọ bụla maka ịrụ ọrụ usoro dị elu. Wụnye rack ngwa ngwa na ụlọ nkwakọba ihe na oge ntinye n'elu ụlọ ga-adị mkpụmkpụ. Nleba anya anya.
Usoro njikwa: nweta data ngwa ngwa site na ngwaọrụ mkpanaka. Akụkọ ihe omume na mkpu. Nlekọta nke etiti nke usoro sel fotovoltaic.
Nchekwa sel fotovoltaic smart: kpakọrịta na optimizer site na MBUS. Na-akwado modul nlekota na njikwa ozugbo.
Batrị smart obibi nke LUNA2000 bụ isi ihe ngwọta Huawei n'oge a. Batrị na-eji batrị phosphate iron lithium iji kwalite nchekwa. Ọ na-anabata atụmatụ modular ma na-akwado mgbasawanye ike na-agbanwe agbanwe (5-30 kWh). Ngwungwu batrị ọ bụla nwere ihe nrụpụta ike arụnyere n'ime ya iji kwado njikwa ụgwọ na nnwere onwe.
Sistemụ Fusion Solar na-enye nhọrọ kacha mma fotovoltaic ike nke nwere ike igbochi nsogbu ndo obibi ma mee ka ojiji nke sistemu fotovoltaic rụọ ọrụ nke ọma na-ebuga ụlọ ndị gbagwojuru anya agwakọta.
Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, onye na-eme ka ọ dị mma nke Huawei mere nwere ike ịbawanye ike ike nke modul fotovoltaic ruo 30% n'agbanyeghị ndò na ntụziaka nke obere arụmọrụ.
The Artificial Intelligence Driven Arc Fault Circuit Breaker (AFCI) na-ebelata ihe ize ndụ nke ọkụ site na teknụzụ mmechi ngwa ngwa, na-enweta voltaji ụlọ efu na ihe egwu efu efu, wee nweta nchebe okpukpu abụọ.
Ngwa nke usoro a bụ ụlọ obibi. Usoro njikwa fotovoltaic smart na-enye ezigbo oge ike na-agụ ike na nguzozi ike, yana njikwa arụmọrụ nke ogwe fotovoltaic.
Nhọrọ nhazi ọnọdụ njikwa gụnyere kacha iji onwe ya, mkpa karịa mmepụta grid, nchekwa PV dị mkpa, mkpa karịa ịgbanye ike PV ngafe n'ime grid. Enwere ike ịhazi usoro ahụ ndị ahịa na-erikwu ume na-akpaghị aka mgbe ọnụahịa dị ala ma chekwaa na-akpaghị aka mgbe ọnụahịa dị elu.
Uru nke ike anyanwụ
Ka anyị hụ ihe bụ uru dị n'iji ụdị ume a:
Ọ bụ ike dị ọcha kpamkpam nke na-enyere aka ibelata akara ukwu carbon. N'ihi ya ojiji anyị na-ezere ọgbọ nke griin haus gas na anyị adịghị emetọ n'oge ọgbọ ha ma ọ bụ n'oge ha na-eji. Enwere naanị mmetọ dị ntakịrị mgbe ị na-eke oghere anyanwụ.
Ọ bụ ume ọhụrụ na-adigide ma na-adigide oge.
N'adịghị ka ume ndị ọzọ na-emegharịghachi, ike a nwere ike ikpo ọkụ.
Ọ dịghị achọ ụdị ọ bụla nke mmepụta ihe mgbe niile ka ọ rụọ ọrụ. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ume dị ọnụ ala nke ntinye ego mbụ ya dị mfe iji nwetaghachi n'ime afọ. Ọ bụ ezie na otu n'ime nsogbu ndị bụ isi nke ume ọhụrụ nwere kemgbe mmalite ya bụ ntinye ego mbụ na ọnụego nlọghachi ya, ọ bụ ezie na nke a abụghịzi ikpe ekele maka mmepe nke nkà na ụzụ. Igwe ọkụ anyanwụ ọ nwere ike inwe ndụ bara uru nke afọ 40 n'ụzọ zuru oke.
Ìhè anyanwụ dị nnọọ ukwuu ma dị ya mere iji oghere anyanwụ bụ nhọrọ dị irè. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla dị na mbara ala nwere ike iji ike anyanwụ mee ihe. Ọ dị mkpa iburu n'obi na otu n'ime uru dị ukwuu nke ike anyanwụ bụ na ọ dịghị mkpa wiwi. Nke a na-enyere aka maka ntinye na mpaghara ebe ọ siri ike ịwụnye wiwi dị otú ahụ.
Uru ọzọ nke ike anyanwụ bụ na ọ na-ebelata mkpa ọ dị iji mmanụ ọkụ, si otú a na-enyere aka ichekwa ihe ndị sitere n'okike na ibelata mmetọ gburugburu ebe obibi.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu gbasara Solar Fusion na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike Igwe fotovoltaic » Ngwakọta anyanwụ